Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise Side Effects Unoda Kudzivisa
/Blog/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise Side Effects Unoda Kudzivisa
Posted on 04 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora Boldenone.
Zvose pamusoro peGarcinia Boldenone Undecylenate
1. Chii chinonzi Equipoise (Boldenone Undecylenate)
2. Equipoise (Boldenone Undecylenate) maitiro
3. Equipoise (Boldenone Undecylenate) migumisiro
4. Equipoise (Boldenone Undecylenate) Purogiramu uye Dosage
5. 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) migumisiro yaunoda kudzivisa
6. Equipoise (Boldenone Undecylenate) recipe homebrew
8. Ndekupi kwaungawana Boldenone?
Chii chinonzi Equipoise (Boldenone Undecylenate)
Equipoise(Boldenone Undecylenate) is testersterone derived anabolic-androgen steroid (AAS) iyo yave iri mumusika kubva kuma 1940s. Ikoko nhamba yeBoldenone esters inosanganisira Boldenone Cypionate, Boldenone Acetate.
Pamusoro pekutaura, equipoise yakashandiswa chete nevashandi vemazuva ano kusvikira gare gare mu1950s apo Ciba yakatanga chikamu chevanhu. Vatsvakurudzi vakagadzira equipoise yebhiza muine chinangwa chokuvandudza chido chavo pamwe chete nehutachiona hwemasumbu.
Vashandi vekushandisa vakashandisa vaifara nekubudirira kunokonzera kugadzirisa iyo steroid iyi yakazara. Kuwedzera pamusoro pazvo, hazvina kukonzera kuchengetwa kwemvura saka hakuna nzvimbo yekutarisa kwakashata.
Yakanga iripo mune zvehutano kusvika ku1970s mushure mokunge yakabviswa. Kuva chimiro chisingawanzoitiki, chinongowanikwa kuburikidza nevechiremba uye misika shoma. Iine mamwe mazita emabhizimisi anosanganisira Bold-one, Boldoject, Boldane, Boldebolin, Equigan, uye Equidex pakati pevamwe.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) maitiro
Kuwanda kwevanhu vanogadzira muviri vave vachiedza kuenzanisa Deca uye Equipoise. Izvo zvose steroids ndeyekupedzisira mukuchengetedza kwemaviri emusimba uyewo mune simba remuviri. Vose vanoita izvi kuburikidza nekuwedzera kweprotini synthesis. Imwe yezvakasiyana ndeyekuti vashandi veCaa vanofanira kutevera zvakasimba post post cycle therapy nemhaka yekuwedzerwa kweserogen inokonzerwa nayo.
Zvimwe zvezvinodhaka izvo vashandi vomuviri vanoshandisa PCT ndezveNolvadex, Clomid, uye Arimidex. Icho ndechimwe chezvikonzero nei vazhinji vakashinga gurus vachifunga kushandisa Equipoise. Imwe nyaya naDaa ndeyokuti inoramba iri mune imwe nzira kwenguva yakawanda. Sezvo inogona kuedza zvakanaka mumuviri wako kwemakore maviri, vatambi vanoongororwa nguva dzose vanosarudza kushandisa Equipoise. Kudzio nguva yekucherechedza inenge mwedzi mitanhatu.
Apo zvinosvika kune boldenone undecylenate madhara nemasikirwo emadhara, equipoise inotakura zuva. Equipoise inozivikanwa kuita kuti androgenic migumisiro yakadai seyamapfudze, bvudzi rechiso, uye kurasikirwa kwebvudzi apo Deca inowanzobatanidzwa nekugadzirisa kuchengetedza uye gynecomastia.
Deca isarudzo yakanakisisa kune avo vanotarisa kune vakawanda kana equipoise inowanzoshandiswa mukucheka maitiro. Hazvishamisi kuti vanhu vakawanda vanosarudza kushandisa boldenone yekucheka sezvo ichipa mhinduro dzakakwana.
Kuti udzidze zvose, Equipoise inowana rudo rukuru kubva kune umwe neumwe nekuda kwekunonoka asi kunononoka kunowirirana kunopa mushoko remasimba simba uye mashoma pasina kukuisa mumatambudziko ekutambura nemagumisiro eesrogenic. Inogonawo kuva chikamu chenguva refu. Uyezve, Equipoise inobata maoko aDaa pasi apo inouya pakusimudzira kwekutsva kwemasero eropa neropa rekuchiva.
Boldenone Undecylenate inopa zvimwe zvakafanana ne testosterone kana zvichisvika pakuwedzera kukura. Vose steroidzi vakakunda uye vakwanisa:
Nitrogen kuchengetedza kunotungamirira kumusimba kukura kana kuti panzvimbo yekuchengetedza.
Deredza nhamba yehomoni yeglucocorticoid
Kuvhara glucocorticoids kunowedzera kuparara kwemapurotini kuita zvikamu zviduku seamino acids. Izvozvo zvinoreva kuti zvose testosterone uye equipoise zvinogona kupfupisa chikamu chechipiri chemasabetism.
Nekuderedzwa kwemahomoni e glucocorticoid, nguva yakawanda iyo mishonga yako inotora kuti iwanezve mushure mekuita basa kunopedza zvakanyanya.
Kuwedzera IGF-1 yakabuda
Insulin-Sekukura Kwechikonzero 1 (IGF-1) inobatsira kubereka uye kuchinjazve masero mumuviri wose. Nokudaro, pane kusikwa kwemasimba makuru uye kudzivirira musimba kuparara. Equipoise and Testosterone kuwedzera kubudiswa kweIgf-1 iyo inokurudzira kuvaka muviri.
Kuvandudza puroteni synthesis
Mapuroteni hapana mubvunzo chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru mumuviri wako. Ndizvo zvinoita kuti muviri uwedzere kana kuchinja. Apo pane purotini yakawanda mumuviri, pane humwe hutsika hunobudirira uye kugadzirwa kwemaviri. Somugumisiro, munhu anogona kudzidzisa zvakaoma uye kwenguva yakareba.
Kugadziriswa kwemavara kwemavara kunoreva kuti kana ukasimudza uremu hunorema kudarika avo wawakamboshandiswa; iwe uchapora nokukurumidza nokuti kugadzirisa kuchave kuri nani.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) migumisiro
Migumisiro ye boldenone undecylenate kushandiswas mukuvaka muviri
Pasinei nekuisa zvose zvaunoita pamitambo yekurovedza, hazvina kuitika here? Zvinogona kukanganisa kuti mushure mekushanda zvakaoma mukuraira, iwe hauna kuwedzera mapaundi pamusana wako. Kana iwe uchigara uchitsvaga chimwe chinhu chinogona kukubatsira mukukanda zvakasimba, zvakachengeteka uye zvinobudirira, ipapo ini ndichakuudza zvakavanzika.
Iwe uri kushamisika kuti boldenone undecylenate inoshandiswa chii? Zvino iwe hauna kuona kuitika kwekuvhiringidza iyo boldenone undecylenate migumisiro. Kunyangwe zvichitora nguva, steroid ino inobvumira munhu kuti awane masimba musimba akashamisa. Kuenzanisa Boldenone vs Deca Durabolin kana Anadrol, the boldenone results hazvizove yakakurumidza.
Izvo zvakanaka ndeyekuti kuwana kunogara kwenguva refu uye kwete semugumisiro wemvura yekuchengetedza. Saka kana iwe uchida kutarisa zvakanaka uye kuva hurukuro yeguta, Boldenone Undecylenate ndiyo nzira yekuenda nayo.
Iwe unogona kunge unoziva kuti iwe haugone kuwedzera musimba wako mashoma kana iwe usingashandisi zvakakwana. Kungofanana neimba kunoda zvakakwana zvinhu zvakasvibirira, misumbu inoda makhahydrates, amino acids, uye mapuroteni akawanda kwavari kuti akure muhukuru. Zvinosuruvarisa, vazhinji vanogadzira muviri havazivi kuita izvi.
Pane dzimwe nguva, muumbi wezvigadziri angakurudzirwa kuti adye zvishoma chikamu chimwe chezviyero zvepamusoro zuva rimwe nerimwe kuti atakure pamatumbu akawanda. Dzimwe nguva zvinogona kuva zvakanyanya.
Icho ndicho chikafu chakawanda kune vose, uye vanhu vazhinji vanogona kuwana zvakaoma kunyange kutora hafu yeiyo. Iwe unogona kuva nechinangwa ichocho chokudya makoriki akawanda kuti uone kuti iwe wakadzika usati watoona kuchinja kwehukuru hwemasumbu ako. Mashoko akanaka ndeokuti imwe ye boldenone inoshandiswa mukugadzira muviri ndeyokugadzirisa zvakanyanya kudya kwechido saka zvinokubatsira kuti uite zvinangwa zvemuviri wako.
Neyo right boldenone undecylenate dosage, iwe unogona kuona kuchinja kukuru kwako Appetite. Somugumisiro, unogona kudya semakori akawanda uye mapuroteni sezvaunoda. Kushandisa ma carbs akawanda, pamwewo, kuwedzera huwandu hweglycogen mumasero ako emasisita saka zvichikupa simba rakawanda panguva yekurovedza. Somugumisiro, iwe uchakwanisa kusimudza uremu hukuru pane iwe wave uchisimudza munguva yakapfuura. Ndicho chikonzero icho chimiro chemuviri nevatambi vanorwisana nechido nguva dzose vanosarudza boldenone undecylenate.
Simba ndicho chinokonzera kukura. Edza uye usakanganwa simba rinobudirira uye iwe uchaona kuti mishonga yako haisi kusvika kuhuwandu hwaunoda kuti vave.
Kuwedzerwa nesimba kune imwe ye boldenone inoshandiswa pakuvaka muviri. Iyo inosimudzira simba revanhu iro rinonyanya kubatsira zvikuru kunyanya chirongwa chekuita kwevanhu vasingazivi. Runako pamwe chete nayo ndeyokuti inokurudzirawo mitambo yekuitawo.
Nekuwedzera mune simba, iwe uchakwanisa kubata mamwe maitiro kunze kwekuti unzwe sokuti iwe uri kuranga iwe pachako. Iwe unogona kutotaurira kuti izvi zvinoguma nei. Kuwedzera kukudzidzisa zvinoreva kuti iwe zvino unowana musimba mukuru.
Kucheka ndeimwe yeBoldenone inofarira inoshandiswa pakuvaka muviri. Zvinowanzoitika pakati pevarimi vemapurisa nemakwikwi vanoda kupedza mafuta akawanda uye vanotarisa nokukurumidza sezvinobvira.
Boldenone Undecylenate is steroid yekucheka iyo inonyatsodzivirira yehutsika hwemaviri. Kana uchinge waziva kugadzira equipoise mukucheka, iwe uchashamisika kuti iwe ucharasikirwa sei mafuta asina kudiwa apo misungo yako ichiri yakasimba. Boldenone yako isati yasvika uye inotevera mifananidzo ichava uchapupu hwokuti uri munhu akasiyana zvachose.
Kurasikirwa nemafuta emuviri, unofanirwa kuva nehotera yekoriori. Zvinoreva kuti iwe unotofanira kupisa makoriri akawanda pane zvauri kupedza. Zvinosuruvarisa, kukanganisa kwekoriki kunogona kukonzera kukanganisa mishonga yako yemuviri sezvo muviri uchiedza kugutsa simba rinodiwa. Kudya kwakanaka kunogona kukudzivirira pane izvi, asi zvingasava nechokwadi.
Kuti udzivise kurasikirwa nemisimba, wakarwira zvakaoma kuti uwane; iwe unogona kusarudza kutora equipoise. Kwete chete ichadzivirira musimba wako wakaonda kubva pakurasikirwa asiwo une maitiro akanaka ekugadzirisa muhupenyu hwako.
Vakawanda vanogadzira muviri vanoshandisa iyo pamberi pekucheka kwekucheka uye vakaguma munguva yehafu yekupedzisira nekuti inogona kukonzera esrogenic madhara.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Purogiramu uye Dosage
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Purogiramu
Equipoise inowedzera mukushandura kwezvinhu sezvaunogona kuishandisa kana woga kana kuisunganidza pamwe chete nezvimwe Anabolic Steroids. Steroid inosarudza inobva pane zvaunoda kuzadzikisa.
The Equipoise maitiro anogona kuenzaniswa sezvizvi:
Vakatanga vatange-Kana uri kushandisa Equipoisefor yekutanga, zvinokurudzirwa kuti utore 300-500mg ye Testosterone Enanthate / Cypionate pamwe ne400mg yeEquipoise kwevhiki. Muvambi wekutanga anotanga kushanda kwevhiki dzinopfuura gumi nemana. Munguva iyi, chero munhu anotanga anogona kuona huwandu hwekuwana muhutu hwemisi.
Pakati pepamusoro- Kana iwe uchitenda kuti une chikwata chepakati chechiitiko uye uchiri kusanyatsoziva kuti ungashandisa sei Equipoise, heino mazano mashoma; Tora Equipoise pamwe chete Dianabol pamutengo we 25mg zuva rega rega kwevhiki imwechete kana ina. Nokuda kweEquipoise, kuyerwa kwacho kwakanyanya kuwedzera ku 400-600mg kwevhiki. Iyo yakawanda nguva yakawanda iyo iri kutenderera inofanira kumhanya masvondo gumi nemaviri.
Zvakawedzerwa zvepamusoro- Avo vane ruzivo rwakanaka vanokurudzirwa kutora Boldenone Undecylenateat muyero wevashoma kudarika masvondo gumi nemaviri pamutengo we 600mg kwevhiki. Trenbolone Enanthate inogona kunge iri steroid yakanakisisa kuigadzirisa nayo neyero ye 400mg kwevhiki.
Equipoise rinogonawo kugoverwa maererano nechinangwa chako. Heanoi mapoka maviri;
Kushandura kunogona kutarisa sezvi;
Dianabol -30mg pazuva rinotungamirirwa kubva muvhiki 1 kusvika kwevhiki 8
Equipoise- 600mg pavhiki inoshandiswa kubva muvhiki 1 kusvika kwevhiki 12.
Boldenone yekucheka chirwere:
Winstrol-35mg pazuva rinoshandiswa kubva muvhiki 1 kusvika kuvhiki 8
Equipoise- 500mg pavhiki inoshandiswa kubva muvhiki 1 kusvika kwevhiki 12
Boldenone chaiyo uye Testosterone rinogona kuratidzika seizvi;
Compound Dosage chinguva
Equipoise 400mg / vhiki 15 mavhiki
Testosterone Enanthate 500mg / vhiki 15weeks
Heano mumwewo anogona kukwanisa kuendesa equipoise;
Vhiki Turinabol Equipoise Testosterone cypionate Nolvadex
1 50mg zuva nezuva 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
2 50mg zuva nezuva 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
3 50mg zuva nezuva 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
4 50mg zuva nezuva 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
5 50mg zuva nezuva 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
6 50mg zuva nezuva 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
7 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
8 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
9 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
10 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
11 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
12 400mg vhiki nevhiki 500mg vhiki nevhiki
13 500mg vhiki nevhiki 20mg zuva nezuva
14 500mg vhiki nevhiki 20mg zuva nezuva
15 20mg zuva nezuva
16 20mg zuva nezuva
17 20mg zuva nezuva
18 20mg zuva nezuva
19 20mg zuva nezuva
20 20mg zuva nezuva
Kuti urege kunetseka nemigumisiro yechirwere, iwe unofanirwa kutevera mazano akakodzera. Yeuka iyo yakakwirira miviri yaunotora, iyo inowedzera kukuvara kwekutambudzwa nemagumisiro eesrogenic inova. Uyewo, iwe unofanirwa kutora dhi rakaenzana kuitira kuti iwe usakwanisa kupotsa pane zvinobatsira.
Kazhinji, muyero weBoldenone Undecylenate unobva ku 200-400 mg pavhiki. Kune varume, muyero we400mg hwakanyatsotsungirirwa uye ndiyo inowanikwa mibare yakawanda yavo ichasarudza kutora. Vamwe vanoenda ku600mg nokuti inobvumirwa zvakanaka uye migumisiro ye equipoise inonyatsokwanisa.
Tichifunga nezve equipoise 'basa rakareba, varume vazhinji vanozvitora / vanotora zvinopiwa nejoi rimwe vhiki. Bhora reBoldenone Undecylenate rinogona kuparadzaniswa kuva majekiseni maviri kana matatu maduku. Yenguva refu Boldenone Undecylenate hafu yeupenyu inobvumira nguva yakawanda yekuvhara majekiseni nemamwe madhara anokonzerwa nemigumisiro.
Kune vakadzi, muwandu weBoldenone Undecylenate inonzi 50mg kwevhiki. Nechiyero ichi, virilization haisi nyore, asi kunzwisisika kwayo kunobva kune munhu. Vamwe vakadzi vanogona kubvumira muyero we 75-100mg, asi unorayirwa kuti usatanga kuva nemyero yakadaro kusvikira uine chokwadi chokuti muviri wako unofara ne 50mg vhiki nevhiki.
8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) migumisiro iwe'll vanoda kudzivisa
Iyo migumisiro yemakwikwi haisati yakashata sezvakakonzerwa nedzimwe steroid. Avo vanoziva nzira yekushanda equipoise zvakanaka, kazhinji havanonyunyuta nezvemamwe matambudziko.
Kunyange zvazvo kune mitsara iyo yeBoldenone Undecylenate inogona kushandurwa ku estrogen, inoitika zvisingaiti. Icho chinonzi estrogen chinogona kunge chakanyanyisa pakuenzanisa boldenone vs deca, asi hafu ye testosterone.
Kuti uderedze kuoma kwemigumisiro, unofanirwa kutora dhiyo yakakodzera. Iwe unogona kutanga nehovha yakaderera uye uwedzere iyo muviri wako uchienderera mberi uchigadzirisa. Paunoita izvi, iwe unogona kuedza kutenderera muviri wako kune iyi anabolic steroid.
Kana ukacherechedza migumisiro yakafanana nekuputika kwetsoka kana kumakumbo makumbo, mavara matsvuku mukati memuromo kana mumhino kana pamuviri, kurwadziwa kwepfupa, kusuruvara kweropa, zvisingawanzi, rurimi rukuru, kushungurudza, kushamisa kudhura, rurimi rukuru, rusina kunaka kubuda ropa kana kurara / mutsvuku / zvitsvuku-zvitsvuku zvinotsvaka rubatsiro rwezvechiremba.
Mukati uye mushure meEquipoise yako, iwe unogona kutambura kubva ku testosterone kuderedza. Kuderera kwekugadzirwa kwe testosterone yako kunogona kuuya nemigumisiro yakasiyana-siyana.
Mune chidzidzo chakaitwa pavarume vemarabhi, kuvakuvadza neEquipoise kwakakonzera kukanganisa kwakakura kwekuberekwa kunyanya kupupurirwa kwe testosterone. Handizvo chete kupereta kwavo kwe testosterone kuderera asi mazinga e-esradiol akawedzera zvakare.
Vazhinji vashandi vevarume vakatambudzwa kubva pasi zvakanyanya se serum leptin concentration. Mazinga e testosterone anogona kudonha zvinoshamisa mushure mokunge mujoyi wokutanga.
Kushushikana kwepabonde basa
Equipoise inogona kukukanganisa iwe SEX upenyu zvisina kunaka nekuda kwekudzingwa kwe testosterone uye isrogen kukurudzira iyo inouya nayo. Zvinogona kuderedza libido yako, uye iwe unogona kunge uine matambudziko kupinda mumamiriro ekuita zvepabonde.
Dzimwe nguva, zvinogona kukonzera gynecomastia zvakare kuzivikanwa semurume boobs, chiitiko chinogona kuderedza kuzviremekedza kwako zvakanyanya. Hapana munhu anoda mudzimai wavo kuti aone kuti vane varume bhoobs panzvimbo yematambudziko akaoma.
Zvakanyanya kuipa, matete ako anogona kukanganisa, uye izvi zvinogona kuita kuti iwe uwedzere huwandu hwemuviri uye kurasikirwa nechivimbo pamwe chete. Nechipupuriro chakasvibiswa, unogona kuva nechokwadi chokuti kubereka vana kungave kwakaoma.
Oily ganda ganda
Sezvo iyo yose iine anabolic uye androgenic steroid, Boldenone inogona kukupa miviri yeusimba uye yakakura iwe wakagara uchitsvaga uye panguva imwechete kuwedzerwa pamurume unhu hwakafanana neakine uye ganda rehuni.
Equipoise inowedzera kukonzerwa kwemafuta eganda iyo inowanzowirirana nekuputika. Kakawanda, iyo acne inowanikwa pachiso uye kumashure. Zvinosuruvarisa, kushandisa chiso kushambidza kuderedza zvingave zvisina maturo nokuti acne inokonzerwa nekuwedzera kwemakemikari uyerogenic mumuviri.
Ipi uye kuora kwechiropa
Equipoise inogona kukonzera kukanganisa kwemuviri, imwe yechiratidzo inogadziriswa nekuchinja kuhukuru, maitiro, uye kushanda kweinso dzayo. Izvozvo zvinoitika kune varume nevakadzi uye zvakabatanidzwa nekuti steroid iyi is androgenic.
Muchidzidzo chakaitwa pamhuka, sarume dzevarume dzinotungamirirwa ne equipoise zvakaratidza zviratidzo zvehepatic (chiropa) nekukuvadza (kidzo). Nyaya imwechete inoitika kuvanhu, uye izvi zvinogona kubatsirwe nekudzidza kunowanika mu Journal of Sports, Medicine-uye Physical Fitness.
Vakadzi vanokudziridza maitiro evanhu
Vakadzi vari pa equipoise vanogona kutambura nehupenyu huripo. Izvi zvinorevei kuti vanogona kuona kuti vanga vatanga kusimbisa unhu uye zvinhu izvo zvinofanira kungoitika kune varume. Semuenzaniso, vanogona kuwana hukuru hwemasisipo avo huri kutsvaga asi panguva imwechete vanokura bvudzi risingadiwi muchiso. Vakadzi havadi ndebvu pavari, uye izvi zvinogona kunge zvakadaro.
Kuwedzera pane izvozvo, vakadzi vari pa equipoise vangarasikirwa nehumwe hwemadzimai avo, vakawedzera hutsinye uye vanoziva izwi rakadzika zvakare.
Kuwedzera mu cholesterol
Kuenzaniswa nedzimwe vana anabolic steroids, equipoise inowedzera kuipa kwakanyanya kunokonzerwa nemwoyo yehutano. Zvisinei, kune mukana wekutambura kune zvakashata pamatunhu emunhu. Kungofanana nedzimwe steroid androgenic inogona kuderedza yako HDL (yakanaka cholesterol) uye irere LDL (yakaipa cholesterol)
Kuchengetedza izvi, tarisa chikafu chakakosha nekudya kudya kwakanaka uye kuwedzera cardio maitiro muurongwa hwako hwokudzidzisa.
Bulking up neEquipoise inogona kuita kuti utambure nehosha yepfungwa. Chikonzero cheizvi ndechokuti kushandiswa kwaro kunogona kutungamirira kune mamiriro ezvinhu anogona kuipa.
Equipoise inogona kusungiridza mhando yevarume yepamusoro uye inoitawo vanhu vasina kumbogadziriswa nayo kuti vatambure nayo.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) recipe homebrew
Bhurozenwa yeBoldenone Undecylenate ye steroid mvura inotevera
EQ 300mg / ml Recipe ye 100ml
Mafuta akabatanidzwa 62.5ml
Benzyl Doro 2ml (2%)
Boldenone cypionate iri ester shomanana yakaenzaniswa ne-undecylenate imwe. Boldenone Cypionate hafu-hupenyu yakakura kwenguva refu uye boldenone nyanzvi yekuona nguva inogona kusvika kusvika kune imwechete nehafu. Pamusana peizvi, Boldenone Cypionate dosage inosanganisira kuva nemajojo akawanda. Hazvishamisi kuti avo vasingadi jekiseni havashandisi Boldenone Cypionate steroid. Rimwe Boldenone Cypionate muyero uri pakati pe100-150mg pam ml.
Boldenone Cypionate steroid inoshandiswa kurapa mabhiza kuti avabatsire kuwedzera pahupamhi pamwe nekuvandudza vhudzi ravo rehudzi uye hutano hwemamiriro ezvinhu.
Boldenone Acetate inowanzozivikanwa seyo-short-acting Equipoise is steroid ine ester yakasiyana nayo yakaiswa pairi. Inonyanya kushandiswa mumabhiza emabhiza, asi varimi venyama vanochida nokuda kwe Boldenone Acetate zvinobatsira kunyanya pamusana wemisonda yakaonda. Boldenone Acetate dosage ndeye 400-800mg inotorwa kamwechete pavhiki.
Boldenone Acetate homebrew recipe (urongwa)
Bertenone Acetate recipe;
2% Benzyl Doro 2ml
Boldenone Cypionate recipe homebrew (urongwa)
Boldenone Cypionate recipe inoumbwa;
1ml Benzyl Doro
15ml Mafuta anogadzirwa
Ndekupi kwaungawana Boldenone?
Sekugadzirisa mashizha kana wemitambo, iwe uri kutarisa nguva yose yechinhu chichakuisa iwe wepamusoro pemutambo wako. Munyika dzakawanda, zvakadaro, kushandiswa kwe Anabolic Steroids yakarambidzwa, uye zvingave zvakaoma kuti iwe uzviwane. Kunyange zvakadaro, iwe unogona kuvanyorera zviri nyore kuburikidza newebsite yepamutemo. Uyewo kutenga paIndaneti kunouya nezvimwe zvikomborero kusanganisira kushandiswa kusina kushandiswa kwekutenga.
PaIndaneti, unogona kuverenga zvakawanda pane steroid yaunoda kutenga. Somuenzaniso, pano iwe unogona kuverenga pamusoro peKirasi yeBoldenone Acetate, Boldenone Cypionate homebrew, chii chinonzi Boldenone uye chero chimwe chinhu chaunoda kuziva pamusoro payo. Nenguva yaunosarudza kuitenga, iwe wakatove wakashongedzerwa zvine ruzivo rwezvinhu zvose pakushandisa kwayo. Uye kuti uite kunyange kushushikana-kusina iwe, iyo yose yeruzivo inowanikwa pakunyaradzwa kweimba yako kana hofisi.
Nzvimbo dzepaIndaneti dzinozvitengesa pamutengo uri nani kana uchienzaniswa nezvitoro zvepanyama. Mutengo weBoldenone uchange usingakwanisi kutengesa paIndaneti nekuti unogona kuwana zvigaro zviri nani. Uyezve, unogona kuwana zvikwereti zvekutenga zvakawanda. Ndiani asingadi kuponesa pane imwe mari yakawedzerwa?
Waiziva here kuti unogona kutenga Boldenone asingazivikanwi pasina munhu wese aifanira kuziva nezvazvo? PaIndaneti, unosvika pakudzivirira mibvunzo yakawanda yaunofunga kuti inonyadzisa. Iwe iwe chete nekambani munoziva zviri muhomwe yako uye chero ani zvake achaona huturu hwechipfuva.
The Boldenone inotengeswa iyo yakanakisisa yehupenyu uye haizombokuodza mwoyo iwe. Icho chisina kusvibiswa uye hachizombofi chakaisa hutano hwako pangozi. Ita webhusaiti yepamutemo inogadzira michina yayo nehurumende yemichina yekushandisa. Iwe unogona kuva nechokwadi chokuti Boldenone yedu yekutengesa ichakupa nemigumisiro yako yaunoda.
Iwe unogonawo kuda kutenga equipoise yebhiza. Tenga iko nhasi, uye bhaji rako haruzombofari.
Equipoise (Boldenone Undecylenate Injection) Nhamba yehupfumi, peji 1-9
Steroid Analysis, yakagadziriswa naHugh LJ Makin, DB Gower, peji 815-823
Chirongwa cheMakemikari yeAsin-antimicrobial Veterinary Drug Residues muKudya, yakagadziriswa naJackF. Kay, James D. MacNeil. Jian Wang, peji 193
Masteron Enanthate I Longer Inobata Androgenic Anabolic Steroid (AAS) Nzira Yokusarudza Steroids Powder Zvokudya mu 12 Steps